About Us - J kanye K auto-accessory elinganiselwe
J kanye K auto-accessory kungagcini itholwe 2009 e Ningbo, kuhloswe ukunikeza amaklayenti aphakathi nendawo kanye elincane amasevisi iyashelela futhi izinga. Njengoba yangempela nomkhiqizi umqondo, samukela oda amancane ezibucayi futhi kwamukeleke.
Ngosizo izisebenzi ezinekhono, futhi amakhosi isampula abanolwazi, sinikezela amaklayenti ethu usiqinisekisa izinga futhi uzizwe adambise yebhizinisi ukubambisana nakho. Eminyakeni sesiphumelele isethaphu ubuhlobo ibhizinisi obuhle ne Ferrari, Polo Motor eJalimane, ukumboza USA futhi DS ukumboza Netherlands, ikhava UKCC e-UK njll Silindele usuku olulodwa ukusebenza nawe ekugcineni.
Growing nekhasimende, Thina kancane kancane kwakheka ezahlukene imikhiqizo evela Universal futhi kwamakhasimende izitayela, zingabantu Car Cover, Isihlalo Cover, Motorcycle Cover, Fender Cover, ikhava iThire, ngempela eziningi ihlanganisa ukuthi awukwazi isithombe kodwa ngempela ukhona embonini yethu .Thina lapha elinde ukuvakasha kwakho.
Manje sinesizathu abasabalalisi e-UK nezwe labaphansi, uma une isithakazelo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Imininingwane COVERABC, ukwenza ibhizinisi lakho lula njengoba ABC. Siyakwamukela.